नवलपरासीका उखु किसान किन भए आन्दोलित ?	Postpati – News For All
नवलपरासीका उखु किसान किन भए आन्दोलित ?
पोष्टपाटी २०७६ कार्तिक २३,शनिबार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
कात्तिक २३, नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीस्थित लुम्बिनी चिनी मिल सुनवलले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा कम मूल्य भुक्तानी गर्न थालेपछि उखु किसान आन्दोलित भएका छन् ।
उपनिर्वाचनकाे लागि थबाङमा सर्वपक्षीय गोष्ठी
सामूहिक गोलभेडा खेतीमा यसरी बढ्यो नवलपरासीका किसानको आकर्षण